Heerkulka sare iyo abaaraha ayaa noqda kuwa soo noqnoqda | Saadaasha Shabakadda
Dhulkeenna waxaa lagu soo rogay dhacdooyin badan oo xagga cimilada ah. Hadda xagaaga, iyada oo kororka kuleylka iyo hoos u dhaca roobka, xilliyada qalalan ayaa bilaabmaya. Abaaruhu waxyeello weyn ayey u leeyihiin dadka iyo noocyada dhirta iyo xayawaanka.
Biyaha waxay la mid yihiin nolosha oo abaaraha soo noqnoqda, daran iyo abaarta daba dheeraataa waxay baabi'iyaan dheelitirka nidaamyo badan oo deegaan. Abaarahaan waxaa uga sii daray saameynta isbedelka cimilada adduunka.
1 Abaaraha iyo kuleylka oo kordhay
2 Saadaali mustaqbalka
3 Dadaallada lagu joojinayo isbeddelka cimilada kuma filna
Abaaraha iyo kuleylka oo kordhay
Sanadihii la soo dhaafay, sare taariikhi ah ayaa loo diiwaan galiyay xuduudaha kala duwan ee caalamiga ah sababo la xiriira dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran. Kuleylka daran, heerarka roobka ee daran, xawaaraha dabaysha daran, iwm. Tusaale ahaan, Abriilkan qadiimiga ah wuxuu ahaa kii ugu kululaa 137 sano. Maamulka Qaranka ee Badweynta iyo Cimilada (NOAA) ee Mareykanku wuxuu muujinayaa in bishii Abriil 2016 iyo 2017 labada cillado ee ugu wanaagsan ee heer kulka adduunka laga diiwaangeliyey illaa 1880. Tani waxay leedahay sharraxaaddeeda waxayna ku saleysan tahay kororka urursiga gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee ku jira jawiga. On June 14, 2017, isku-darka jawiga CO2 ee 409,58 qaybood halkii milyan (ppm) ayaa la duubay, cabir xaqiijinaya sii socoshada kororka gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo iyo tan oo ka dhigeysa meesha ugu sarreysa ee hawo CO2 laga ogaado dhulka 800.000 sano.
Waa in loo qaataa iyadoo la ogsoon yahay in muhiimadda qiiqa gaaska lagu sii daayo ee ficilka aadanaha iyo saameynta ay ku leeyihiin cimilada aan la dafiri karin. Waxaa jira daraasado sheegaya cimilada adduunka ee dadku abuuray dhaqdhaqaaqa jawiga ayaa isbedelaya. Tani waxay keenaysaa soo noqnoqoshada iyo xoojinta dhacdooyinka cimilada daran ay sidoo kale kororto. Hirar badan oo kuleyl ah iyo daadad woqooyiga Hemisphere waxaa sababa qiiqa hawada lagu sii daayo ee keena isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka.
Si aad u awoodo inaad si fiican u saadaaliso waxa dhici doona mustaqbalka, cabbiro iyo indha indheyn lagu kalsoonaan karo inta suurtagal ah ayaa loo baahan yahay. Waa lagama maarmaan in la ogaado, marka loo eego doorsoomayaasha isbeddelaya waqtiga, sida dhulkeenu si toos ah iyo si dadbanba noo saameyn doono. Aad ayey waxtar u leedahay in la saadaaliyo mustaqbalka si loo falanqeeyo wixii la soo dhaafay. Waad ku mahadsan tahay barashada isbeddelada cimilada hore, moodellada ayaa la soo saari karaa si ay uga caawiyaan saadaalinta mustaqbalka. Waa hubaal inaan ogaan karno sida doorsoomayaasha saadaasha hawada qaarkood ay u badali karaan sababo la xiriira kororka uruurinta gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo. Sidan oo kale, waxaan saadaalin karnaa sida ay maanta u dhaqmi doonaan iyo waxa la sameeyo si looga fogaado waxyeelada ugu weyn ee suurtagalka ah.
Saynisyahannadu waxay ku xiran tahay inay darsaan sababaha, cawaaqib xumada iyo isbeddelka cimilada taariikhda Dunida iyo mustaqbalka. Siyaasiyiinta, dhankooda, waa inay dhageystaan ​​takhasusleyaasha kuna saleeyaan go'aannadooda xogta sayniska. Laakiin marka lagu daro tixgelinta caddaymaha ay saynisyahannadu muujinayaan, waa muhiim, wanaagga dhammaantiis, in waxa ay yiraahdeen si sax ah loo fahmay. Si kastaba ha noqotee, siyaasadda ugu cad ee Mareykanka ayaa ka soo horjeedda dagaalka si looga fogaado isbedelka cimilada Ka bixitaankii Donald Trump ee Heshiiskii Paris.
Dadaallada lagu joojinayo isbeddelka cimilada kuma filna
Waa nasiib daro in la arko sida saameynta isbadalka cimilada maalinba maalinta ka dambeysa ay u sii muuqaneyso iyo masiibooyin galaafta kumanaan kun oo qof sanadkii hadana dadaalada lagu doonayo in lagu joojiyo kuleylka adduunka ayaan ku filneyn. In kasta oo dhammaan waddammada adduunku u hoggaansameen heshiiskii Paris milimitirka, celceliska heerkulku wuxuu ka sara mari doonaa 2 darajo oo bulshada cilmiyadu u dejiso inay xaddidan tahay.
Caqabadaha ka dhalan kara isbedelka cimilada ayaa ah kuwo muhiim ah oo deg deg ah. Xalku waa dhib badan yahay, iyo waxyaabo kale, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin heshiisyo caalami ah, waxqabad deg deg ah iyo waqti dheer, iyo si deeqsinimo leh. Iyada oo ay la soo gudboonaatay dhibaato baaxaddaas le'eg iyo muhiimadda adduunka, ka-qayb-qaadashada dhammaan waa loo baahan yahay, gaar ahaan kuwa leh awood badan oo wax badan ku soo kordhin kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » Heerkulka sare iyo abaaraha ayaa noqda kuwa soo noqnoqda
Kaymaha Mediterranean-ka ayaa 100 sano kadib noqon doona dhul xora